Nosy Koh Samet, Pattaya ~ Journey-Assist - Pattaya. Ny tora-pasika tsara indrindra. Ahoana no hahatongavana any
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Samet, Pattaya
Nosy Koh Samet. Pattaya
Fampijaliana ny nosy Koh Samet
Amin'ireo nosy rehetra any akaikin'i Pattaya, dia Koh Samet, araka ny filazan'ny mpizahatany efa za-draharaha maro dia mirehareha ireo torapasika tsara indrindra. Ny fotodrafitrasa novolavolaina tsara dia natao tsara miaraka amin'ny fisian'ny morontsiraka mangina maro, izay vitsy dia vitsy ny olona. Ao amin'ny Koh Samet dia misy sehatra fijerena matetika, izay manomboka misokatra panoraha mahafinaritra. Ity nosy ity dia mety amin'ny teti-bola rehetra, satria eto dia afaka miaina sy mora kokoa, saingy afaka mandehandeha tsara ianao.
Aiza ny Nosy Koh Samet
Ko Samet dia ao amin'ny faritany Thai ao Rayong ary 6 km miala ny tanibe. Avy eto, tsy lavitra ny Pattaya (80 km), ary koa ny renivohitra Thailand (200 km). Noho izany antony izany, be dia be ny mpizahatany tonga any Koh Samet hitady torapasika kalitao. Koh Samet dia 7 km ny halavany ary 4 km ny sakany.
Sarintanin'ny Nosy Samet
Fanintonana an'i Koh Samet
Amin'ity nosy ity, ny fahalianana mpizahatany dia vokatry ny tora-pasika sy ny endrika tsara tarehy. Na izany aza, misy manintona vitsivitsy izay mendrika manintona.
Valan-javaboary ao Ko Samet
Ao amin'ity nosy ity dia ny zaridainam-pirenena Khao Laem Ya.
Ny fidirana amin'ny taniny dia 200 baht ho an'ny olon-dehibe ary 100 ho an'ny ankizy. Ankoatra izany, ny vanim-potoana fankatoavana ofisialy ny tapakila dia 5 andro.
Na izany aza, amin'ny fampiharana dia tsy voafehina manokana ary matetika rehefa mividy tapakila dia afaka miditra amin'ny zaridainanao mandritra ny vanim-potoana ijanonanao ao Koh Samet, na dia mihoatra ny 5 andro aza io fotoana io.
Bouddha be amin'i Ko Samet
Anisan'izany, indrindra ny Big Buddha. Raha ny tena marina dia tsy sarivongana fotsy lehibe (maromaro metatra) io, maneho ny Enlightened izay naka ny toeran'ny lotra. Nisy alitara naorina teo anoloany, izay nametrahana voninkazo sy ditin-kazo manitra. Misy sary sokitra maro hafa napetraka eo akaiky eo, ny haavony izay manakaiky ny haavon'ny olona iray. Ireo sary sokitra ireo dia mavo.
Prince sy Mermaid amin'ny Koh Samet
Prince sy Mermaid ao amin'ny Ko Samet
Manakaiky ny ranomasina any amin'ny iray amin'ireo torolàlana Samet, antsoina hoe Sai Keo, eo amin'ny lampihazo vato natsangana, ahitanao ny sary sokitra an'ny Printsy sy ny Mermaid. Natsangana teo ambany fitarihan'ny tononkalo Phra Aphai Manee, nosoratana tamin'ny ser ser. 19 Art. Ilay poeta Thailandey Sunthorn Phu. Io sary sokitra io dia mampiseho andriana mipetraka eo amin'ny vato ary mitazona eny an-tanany na lelafo na mpitsikilo, ary eo akaikiny dia sipa.
Saripika misy zazakely eny an-tsandriny
Saripika misy zazakely eny an-tsandriny. Ko Samet
Raha ny tenany, eo amoron-tsiraka Samet ianao dia mahita sirena sokitra hafa, izay mihazona zazakely iray eny an-tsandriny.
Ary somary hatsaran-tarehy iray aza - ity mpivaro-tena ity no eto amin'ny seranana
Zazavavy ao amin'ny seranana ao amin'ny Koh Samet
Dinika nomeraon'ny nomerao 1 tamin'ny Ko Samet
Ny tsara indrindra amin'ireo sehatra fijerena ireo dia any amin'ny faritra andrefan'ny Nosy. Rehefa eo ianao dia afaka mankasitraka ny Hoalan'i Thailand. Ao daholo ny fanaka - tohatra azo antoka, lakandrano, famonosana, trano fidiovana, hilentika mandro. Raha ny habe, lehibe ity tranokala ity. Izy io koa dia ahitana trano azo hofofana hivelomana Manana ny zavatra ilainao amin'ny fiainana mahazatra izy ireo, ao anatin'izany ny fametrahana mari-pana. Avy amin'ity tranokala ity ao anatin'ny 5 minitra dia afaka mandeha mankany amin'ny torapasik'i Ao Prao ianao, izay malaza amin'ny hatsarany sy ny fiainana manokana.
Dinika nomeraon'ny nomerao 2 tamin'ny Ko Samet
Doka fanaraha-maso hafa momba an'i Ko Samet antsoina hoe Sai Keo. Any akaikin'ny faran'ny avaratra amoron-dranomasina mitovy anarana izy io. Rehefa eo amboniny ianao dia afaka mizaha ny ilany atsinanan'i Samet, raha ny toerana misy anao ihany no ahitanao ny ranomasina sy ny ampahany kely amin'ny havoana ihany. Izy no tranon'i Sai Keo izay toerana tsara indrindra hahazoana sary an-tsary an'ny nosy. Mandritra izany fotoana izany, tsy misy sisin-damba sy kojakoja hafa ao. Izy io dia havoana misy vatolampy, izay ampahany feno zava-maitso. Fa ity havoana ity dia somary midadasika, ka maro ireo teboka misy fijery tsara. Lalana milamina kely no mitondra, ka tsy mila mandehandeha ianao. Tsy sarotra ny hahatongavana any amin'ny efijery fanaraha-maso an'i Sai Keo. Tsy maintsy miakatra eo amin'ny farany avaratry ny Sai Keo Beach ianao. Any ianao dia afaka mahita ny lalana miakatra, ary miaraka manakatra amin'ny toerana irina izy io.
3, 4, 5 ao amin'ny Ko Samet
Any amin'ny tapany atsimon'i Ko Samet dia sehatra telo mijery sehatra telo. Ny elanelana eo amin'izy ireo dia 100-200 m. Amin'ny andro, tena tsara tarehy izy io noho ny sary mahafinaritra eo amin'ny havoana sy ny morontsiraka. Ao amin'ny iray amin'ireny tranonkala ireny dia misy fika izay ahafahanao mipetraka, fa ny tranonkala roa hafa dia toy ny kianja lehibe iray vita amin'ny vato. Misy toerana ampy ho an'ny rehetra. Ny sasany mipetraka eo akaikin'ny morontsiraka araka izay azo atao. Ny hafa kosa te hijanona ao amin'ny alokaloka noforonin'ny hazo maro. Eo koa ny fahafahana hanakaiky ny hantsana, ary amin'ny toerana sasany any amin'ny ranomasina. Eo akaikin'ireo toerana telo ireo dia misy ny fiantsonana, ary eo amin'ny faritaniny dia misy trano fidiovana misy kamory. Akaiky dia trano maro ho an'ny mpiasa ao amin'ny zaridainam-panjakana Khao Laem.
Ahoana ny fomba hidirana amin'ireo sehatra mpijery ireo
Mba hahazoana any amin'ireo sehatra fijerena telo ireo dia tokony handeha amin'ny lafiny atsimo ianao na aiza na aiza ao Koh Samet amin'ny lalana asfalt. Vao eo amin'ny toerana nahavita azy no misy ny parking eo akaikin'ny tranokala. Azonao ajanona ao ny fiaranao. Avy eo dia mila mandeha an-tongotra mandritra ny roa minitra mankany amin'ireo tranonkala any anaty ala ianao. Ny lalana akaiky indrindra amin'ny toeram-piantsenana no tena faritra misy ny dabilio.
Tempolista bodista amin'ny nosy Koh Samet
Misy koa ny tempolista bodista iray ao amin'i Samet, izay ahitana ny fisehon'ny trano 2 rihana kely. Na izany aza, tsy dia fomban-drazana ho an'i Thailand ny fomba fanaovany maritrano. Ireo lanonana ara-pivavahana dia atao indraindray.
Beaches Ko Samet:
Tian'i Sai Keo amin'ny Nosy Koh Samet
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https: //goo.gl/maps/f1AQYHRqf5pq66TN6
Tora-pasika Jeps (Torapasika Jep)
Ny morontsirak'i Jep ao Koh Samet
Ahoana ny fomba hidiran'i Koh Samet
Mora kokoa ny mankany Koh Samet mankany Bangkok avy any Bangkok noho ny any Pattaya, fa raha ny tranga voalohany dia hitohy kokoa ny dia.
Avy any Bangkok ka Koh Samet
Ireo bus avy amin'ny Ekkamai Bus Station dia mankany Ban Phe Pier. Aty amin'ity tobin'ny bus ity dia mila mitady birao tapakila izay hanana ny soratra amin'ny fiteny anglisy "Koh Samed". Ary eo amin'ny bus izay ilainao dia manondro ny lalana "Bangkok - Chanthaburi". Tokony hanamarina miaraka amin'ny mpanodina, mandeha anaty bus, momba an'i Ko Samet. Ny saran-dalana dia 150 baht. Afaka adiny telo eo ho eo izany. Mandeha matetika ny fiara fitaterana matetika amin'ny 3 maraina ka hatramin'ny hariva.
Afaka maka fifindrana vondrona amin'ny orinasa mpitety fizarana ao amin'ny Khaosan Street in Bangkok ianao. Amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana, ny mpizahatany no entina mankany amin'ny seranana, ary avy any dia hiala ny sambo amin'ny Koh Samet.
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Bangkok
Misy fomba maromaro ihany koa mankany amin'ny Koh Samet avy ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Bangkok:
Afaka mitondra taxi ao amin'ny seranam-piaramanidina mankany Samet fotsiny ianao. Marina fa mitentina 2 000 baht farafahakeliny. Azo zahana amin'ny alàlan'ny Internet ny Taxi, azonao atao koa ny mandamina amin'ireo mpamily fiarakaretsaka eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Avy amin'ny seranam-piara-manidina ihany koa ianao dia afaka haka taxi na metro mankany afovoan'i Bangkok, avy eo - mankany amin'ny toeran'ny bisy Ekkamai. Afaka mitaingina bus ianao ary tonga any amin'ny seranana Ban Ban Phe, izay mandehanan'ireo sambo mankany Koh Samet.
Tsara ny mampatsiahy fa raha tonga taty an-drenivohitra Thailand ianao ny tolakandronao dia tsy mbola afaka hahita ny ferry amin'io andro io ianao. Mila mandany ny alina aloha any Ban Phe ianao na any Bangkok.
Avy any Pattaya ka hatrany Koh Samet
Tena sarotra ny mankany amin'i Sam Samet avy any Pattaya irery. Tsy misy fiaramanidina mivantana mankany amin'ny pier Noho izany antony izany, ny hany safidy iray dia ny famindrana avy amin'ny fomba fitaterana mankany amin'ny iray hafa (voalohany a tuk-tuk mankany Sukhumvit, avy eo minibus mankany Rayong, avy eo ny tuk-tuk mankany amin'ny voromahery). Ny fomba mora kokoa dia ny handidy fifindrana (afaka vondrona na olon-tokana izy ireo). Amin'ity tranga ity, ny vidin'ny famindrana dia saika mitovy amin'ny saran'ny totalin'ny lalana mahaleo tena (manodidina ny 300 baht).
Weather on Ko Samet Today + Forecast
Ny widget dia mampiseho ny toetrandro ankehitriny amin'ny Ko Samet. Mihetsi-po tanteraka izy io. Azonao atao ny misafidy ny sosona tadiavinao (onja, rivotra, rahona ary maro hafa).
Hotely any Ko Samet
Mandritra ny famenoana ...
Ny nosy, izany no hany tombony fialan-tsasatra amin'ny fialan-tsasatra mahazatra any Pattaya ...